Ogaden News Agency (ONA) – JWXO Lix iyo Toban sano ka hor
JWXO Lix iyo Toban sano ka hor
Filimkan hoose waxaa la duubay sida ka muuqata 1996kii, laba sano ka dib markii ay ciidamada wayaanaha go’aansadeen inay ka suuliyaan jiritaanka ONLF awood leh iny joogto gudaha Ogadenya oy weeraka ku soo qaadeen ciidankii yaraa ee ONLF.
Gudoomiye-kuxigeenkii JWXO mudane Maxamad Yaasiin Diirane ayaa kula hadlaya jaaliyadaha dibadda uguna baaqaya inay halganka ka qaybqaataan say u helaan waddan xor ah oy ku soo laabtaan haddii laga soo tarxiilo wadamada ay iska dhiibeen.
Mudane Diirane waa Hogaanka Arimaha Abaabulka iyo Bulshada oy hoos yimaadaan ugu yaraan 62 jaaliyadood iyo Ururada bulshada ee Dhalinyarada, Haweenka iyo Indheergaradka oo intaba ah lafdhabarka halganka ka socda Dibada iyo Gudaha.
Hawl muhiim ah markaad ku jirto gaar ahaan halgan gobanimadoon waxaa lagama maarmaan ah inaad dib u eegto meesha aad ka soo ambaqaaday iyo heerka aad joogto saad u ogaato hurumar iyo dibu dhac midka aad kusugantahay.
16ka sano ee ka soo wareegatay filimkan waxaa ka socday gudaha Ogadenya iyo dalalka ay jaaliyadaheena ka hawgalaan halgan adag oo gumaysiga Itobiya uu adeegsaday talaaba kasta oo waxashnima ah suu shacabka Somaliyeed ee Ogadenya u ogolaysiiyo adoonsigiisa. Natiijadii maxay noqotay? Taariikhda ayaan ka sugaynaa jawaabtaa.